Ciidamada Kenya oo dhaq-dhaqaaq ciidan ka bilaabay xuduudda Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Ciidamada Kenya oo dhaq-dhaqaaq ciidan ka bilaabay xuduudda Soomaaliya
Ciidamada Kenya oo dhaq-dhaqaaq ciidan ka bilaabay xuduudda Soomaaliya
Mandheera (Caasimada Online) – Dowladda Kenya ayaa boqolaal ka tirsan ciidamadeeda soo dhoobtay xuduudka Soomaaliya kadib markii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen tuulo ka tirsan degmada Mandheera.
Xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegay inay weerar ku burburisay xarun isgaarsiineed oo ku taal magaalada Rhamu kadib markii ay xoog ku galeen xarunta.
Sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan booliska, waxaa la maqlay jug xooggan taasoo markii dambe la ogaaday inay Al-shabaab bom ku qarxisay xarun isgaarsiineed oo ay leedahay shirkadda isgaarsiinta Kenya ee Safaari.
Ciidamo ka tirsan kuwii ilaalinayey xarunta ayaa iska caabiyey kooxihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday, waxaana la xaqiijiyey inay markii dambe ka baxsadeen markii ay gubeen.
Dowladda Kenya oo ka jawaabaysay weerarkii dhacay , waxay ciidamadeeda ammaanka u dirtay inay ugaarsadaan raggii falkan ka dambeeyay, kuwaas oo u baxsaday aagga xuduudda Soomaaliya.
George Seda oo ah taliyaha booliska waqooyi bari ayaa sheegay in ay diyaariyeen ciidamo badan oo booliis ah si ay uga daba tagaan kooxda weerarka geysatay oo u baxsaday dhanka xadka.
Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro qorsheysan ka fuliso gudaha dalka Kenya, waxayna saldhigyo ka sameysteen deegaano buuraley ah oo dalkaas ku yaalo.
Kooxdaan ayaa ku hanjabtay inay sii wadi doonto weerarada ay ka fuliyaan gudaha Kenya inta ay ciidamada Kenya isaga baxayaan gudaha Soomaaliya, gaar ahaan howlgalka midowga Africa ee AMISOM.
Kenya aya dhankeeda wacad ku martay in aysan ka baxeen Soomaaliya illaa laga ciribtiro kooxda Al-Shabaab taasoo aan weli suuragelin 15 sano kadib.